Nepalistudio » बामगठबन्धनको एकता कि ए–कता ? बामगठबन्धनको एकता कि ए–कता ? – Nepalistudio
बामगठबन्धनको एकता कि ए–कता ?
बामगठबन्धनको सरकार निर्माणको हल्ला चलिरहेका बेला बाम गठबन्धन भित्रै आगो सल्किएको कुरा बाहिर आऊन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्बाचन अगाडी एमाले र माओबादी केन्द्रका बिच भएको सहमतिमा गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै गठबन्धन बिच खटपट शुरु भएको छ । निर्बाचन अगावै अढाई अढाई बर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति समेत पछिल्लो समय आएर संकटमा फसेको छ ।
सरकार निर्माणमा किचलो शुरु भएको प्रष्ट देखिन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेमाथि फोरमसँग मिलेर सरकार बनाउने असफल प्रयास गरेको आरोप नै लगाईसकेका छन । उनले जनताले सरकारको चाबी माओवादीलाई दिएकोले एमाले पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको बताउँदै एमालेलाई चुनौति दिईसकेका छन । प्रचण्डले माओबादी तेस्रो भएपनि माओवादी निर्णायक रहेको बताएका छन । यी यावत कुराहरुले बामगठबन्धन भित्र एकता भन्दा पनि ए–कता ? को बिजारोपण शुरु भईसकेको छ । निर्बाचन अघि भएका सहमतिको कार्यन्वयन भन्दा पनि कसरी सरकार बनाउने र सरकार टिकाउने भन्ने खेल शुरु भएपछि पार्टीभित्रै बिवाद शुरु भएको देख्न सकिन्छ ।
समानुपातिकमा एमाले र कांग्रेसको मत झण्डै समान आएपछि एमाले एक्लै बहुमत नपुग्ने र माओवादी विना सरकार नबन्ने अवस्था आएको अबस्था छ । यहि अबस्थामा एमालेले माओबादी केन्द्रसँग गरेको सहमतिलाई लात हान्दै संघीय फोरमसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेको प्रष्ट बुझन सकिन्छ । राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओबादीलाई लात हानेरै भएपनि आफु सरकारमा पुग्न आतुर रहेका छन । उनले त्यसका लागी अनेक हत्कण्डा अपनाईरहेका छन । उनले गठबन्धनलाई लत्याउँदै ‘उपेन्द्रसँग हुन्छ कि भनेर कोसिस समेत गरेका छन ।
शनिबार एक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वाम गठबन्धन तोड्न ठूलठूला अफर आएको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत समर्थनको प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले कांग्रेसका तर्फबाट ५ वर्ष माओवादी एक्लैको सरकार बनोस, हामी समर्थन गर्छौं भन्ने आएको समेत सुनाए । जनताले वाम गठबन्धनका लागि भोट दिएकाले आफू अन्यत्र नलाग्ने उनको भनाई थियो । पार्टी एकता गर्ने र सरकार बनाएर अघि बढने प्रचण्डले बताईरहँदा र पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई नियाल्ने हो भने बामगठबन्धन भित्र चरम असन्तुष्टि र खटपट शुरु भईसकेको छ । यस्ले पार्टी एकता र सरकार गठनमा महत्वपुर्ण असर पर्ने देखिन्छ ।
बमगठबन्धन पछि एक भएका माओबादी एमालेका कार्यकर्ताहरु निर्बाचनपछि पार्टी एकता हुने र अब बन्ने सरकारपछि मुलुक समृद्धितर्फ अगाडी बढने आशामा रहेका छन । देशमा समृद्धि कायम गर्दै मुलुकले बिकासको फडको मार्ने सबै देशबासीको आशा रहेको छ । तर बिकसित घटनाक्रमले त्यो कुरा नहुने पो हो की भन्ने संकेत समेत देखाएको छ । तसर्थ बिकसित घटनाक्रम र अतिरोधको अन्त्य गरी ए–कता ? हुन नदिई बामएकता गरेर अगाडी बढन जरुरी देखिन्छ ।